Ambila — Tsara Soratra
Mamoha varavarankely vao maraina dia manombana iry fara-vodilanitra. Maminavina ny mety ho toetr'andro.
Andro vitsivitsy eto Ambila ka gohina mandra-tankina.
Mitopy fotampotaka ny onibe ? Tsy azo antenaina fa hibaliaka ny andro.
Mahery misavoana ny onja, miantoraka amin'ny morom-pasika ? Hatosiny hiankandrefana ny rahona manaloka, mbola hisava ny any ambadika any.
Mangirana mitselatra, mitopy maintso manga ny rano mivalombalona voatsipika fotsy miraodraotra. Mifohaza Ra-Tanivo fa hivelatra mangina ho anao ny hatsaram-panahin'Ambila.
Roso ary ho eny amin'ny ranomamy hanaitra ny saina sy eritreritra vonton' ny torimaso. Aty Ambila marina !
Efa manasa lovia ao anaty fasika ny kilonga. Efa mihalohalo eo ny gana arahin'ny tariny, hiraoka ny fotsimbary tavela. Efa mandalo tsy rototra koa ny lakana hivarotra mangahazo sy anana any an-tsena.
- Akory lahaly !
Averimberin'ny morona mifamaly ny fifampiarahabana. Misosa toy ny aloka maivana ny lakana hafa mitondra mpandeha manao satroka be sofina. Misosa koa aho ao anaty rano.
Pok ! Miantefa tsimoramora eo anivon'ny ony ny voan'ilay hazo manaloka. Boribory tonga lafatra, maitso malefaka, mahate-hitahiry an-tànana. Ataon' ny ankizy kanety. Atsipiko izay fara-heriko ery afovoan'ny rano ka mandihy mamela faribolana mifanesisesy. Na izaho efa roa volo izao aza dia miverina lasa ankizy mifalihavanja ato anaty rano. Mitsilany milona miatrika ny lanitra manga tetezin'ny rahona maivana. Na koa variana mijery iry mpatsaka miampita. Arahina tsy nahy raha efa eny na tsia . Tsy izay lalam-pasika fotsy hatsatra mitsontsorika mamonjy rano rehetra ireny mantsy no sendran'ny loharano. Iry eo ambanin' ny satrana sy ampalibe izy no niantsona. Lavitra a ! Arahiko maso anelanelan'ny tsato-bila fisakana trondro izy. Mitatitra siny. Mangilohilo ny lamosiny, asongadin'ny hafotsin'ny fasika. Milanto ny fihetsiny fa izy irery no eto amin' izao tontolo izao ary tsy azony an-tsaina fa manara-maso azy ity vahiny.
Ety andafin'ny rano kosa, misosa moramora izy mirahavavy miambalahana rano, misintona vovo. Zara raha tsy voasafon' ny rano ny bodo am-babena. Tsy misy mivolana fa mifantoka amin'ny ao anatin'ny rano mangarahara ny masony. Voasintona any koa ny ahy. Tsy mahita afa-tsy tahon-kazo toa voalahatra eo ambonin'ny ravina efa lo. Miato ny kotaba fa sao dia mandiso anjara ireto mpanihika. Fitadiavana ny azy fa tsy lalao.
Izaho kosa mandray lambahoany marevaka dia manainga maivamaivana ho eny amoron-dranomasina. Manaraka ny tongotra ny fasika mitopy mainty manjopiaka fa tsy fantatra ny kiraro aty Ambila. Eo amin'ny làlan-kely dia tsy mety ny tanana fa mbola toy ny ampela mioty voninkazo sendra ny maso. Sodokan'ny loko mirentirenty : Vony ranoray rebareba ny an'ny ramiary. Mena jaky mitaritarika toy ny kavina ny rofia, mavokely maotimaotina manao salohy falifaly ary ndry ! iry ery mandady amin' ny tany mitady alokaloka ny aza manadino manga gintanginta saika tsy hita.
SSS...Ndray, tanalahy kely ... Notairiko ka lasa nitsoriaka ao anaty veromanitra. Noheveriko fa bibilava ka efa niantsambotra aho. Ndeha aloha hatao anaty zinga ireto ravaka mora tola. Ahifika ny vitsika nanaraka ity fanja vololona misaritadritakin'ny mena laingo. Moa ve tsy toy ny sikin-jazavavy revon-dia ka misarika ny mason'ny manina ?
Tsy tamàna ao an-trano anefa aho fa fotsy varavarana rehefa aty Ambila. Manofahofa koa ny rantsan' ny hazo voanio eo ala-trano Ndeha hilalao.
Tora-pasika tsy hita noanoa misalo-javona na serena mianavaratra, afangaro amin' ny rahona raha todihana mianatsimo. Hono hoy aho ry rano, aiza ny farany ? Hono hoy aho ry lanitra, aiza ny fetra. Ary hono hoy aho ry fasika, aiza ny tendrony ? Ny felatanan' ny habakabaka manga antitra mandrakotra. Ny ranomasina manafosafo sy milaza angano tsy misy farany. Ny tora-pasika mamihina mahamay ny faladia ary ny alan' Ambila mihalohalo mamaly feo ny onja miantefa. Eo anivon' izany rehetra izany aho irery hisangian' ny rivotra madio mahatrihatry. Lasa lavitra nefa mamikitra koa.
Haody haody ry vorona tsirairay manoloana , toa maka fanahy nefa manao findran-tsokina raha vao hatonina. Haody haody ry foza bobo maika fisintaka, malain-kitafa. Haody haody ry akorandriaka saron-kenatra ,tsy mahafoy fasika. Izahay mbamin' ny sila-bato mamiratra sy ny voan-karabo lefin' ny andro no mifanatrika sy mifampitsirika ary mifampivolana. Izy ireny mantsy no fototra fiandry tora-pasika.
Vavolombelon' ny faharetan' Ambila. Mandalo avokoa ianareo rehetra hoy izy fa izahay eo ihany. Mamangivangia hono e ! Mitsiditsidiha hono e !
Rantsam-bararata tolan' ny andro. Voapalesin' ny rivotra. Raisina entina mody, sao mahabanga ny morontsiraka. Avela , sao hamelovelo hanina rehefa tody any Vohitsara.
Kinanjo. ... Tsy ankiteniteny fa misy tentin' Ambila lasa aty anatiko. Tsy azo esorina fa tandra vadin-koditra. Toy ny aviavy masaka ifotony ; mangarahara fa ao foana ilay maminy.
Ahoana hoy ilay hira ?
« Ao amoron-dranomasina ao
Ao atsimon' i Toamasina ao
Misy toerana izay mahatamana »
Lasan'ny rivotra ny lambako fa ombay hazakazaka hanenjika e !
Tia manoratra i RaMikAnjara. Tia mamaky boky. Tia mijery sy mikarakara voninkazo. Tia izay rehetra heveriny ho kanto. Tia mianatra momba ny tantaran'i Madagasikara ihany koa. Mipetraka ao Antananarivo izy.
tagged with Ambila, fakafaka